I-Saint Helena Visa | I-eVisa kwi-Saint Helena | natvisa.com
Isicelo seSaint Helena Visa kwi-Intanethi
Ababhenkethi bacwangcisa uhambo oluya eSaint Helena ngoku banokufumana i-visa yabo kwi-intanethi. Inkqubo yekhompyutha esandula ukwaziswa ivumela abahambi abavela kumazwe ahlukeneyo kwihlabathi liphela ukuba benze isicelo solu xwebhu nakweyiphi na indawo. Yonke le nkqubo ilula kakhulu, apho umfaki sicelo angaqala ngokugcwalisa ifom yesicelo kwi-intanethi kwaye agqibe inkqubo ngokwenza intlawulo yevisa. Abafakizicelo kufuneka bangenise la maxwebhu alandelayo ukuze bafake isicelo se-visa-ikopi ekhutshiweyo kwiphepha leenkcukacha zakho zepaspoti, ifoto yomenzi-sicelo, uhambo lokuhamba, i-inshurensi yezonyango / yokuhamba kunye nobungqina bemali. Abafaki-sicelo kufuneka babe nepasipoti efanelekileyo yokufaka isicelo se-eVisa eSaint Helena.
Iintlobo zeVisa yaseSanta Helena
Abakhenkethi abakhenkethi Imeyli I-90 ukuya kwi-180 yeentsuku Ukuya kwiintsuku ezingama-90/180 Zodwa / Zimbini Faka isicelo ngoku
Fika eSaint Helena
Ekufumaneni i-eVisa eSaint Helena, abafaki-zicelo kufuneka benze isicelo sokuqala semvume yokuhamba, okt i-eVisa. Kwinkqubo yesicelo se-visa, abafaki-zicelo kufuneka banikeze iikopi eziskeniweyo zephepha leenkcukacha zakho ipaspoti, yomenzi-sicelo ifoto, hambani uhambo kunye nonyango / uhambo inshorensi.
Wonke umenzi-sicelo owenza isicelo se-eVisa eSaint Helena kufuneka abene-id ye-imeyile esebenzayo. I-id ye-imeyile ibalulekile kuba emva kokuba i-eVisa yenziwe, iya kuthunyelwa kule id. Kwakhona, naluphi na ulwazi lwe-visa luya kuthunyelwa kule id; yiyo loo nto i-imeyile id ibaluleke kakhulu.
Ngaphambi kokufaka isicelo se-eVisa eSaint Helena, abafaki-zicelo kufuneka baqinisekise ukuba ipasipoti yabo isebenza ngokusemthethweni. Ukulungela inkqubo yokwenza isicelo ye-eVisa, ipaspoti kufuneka isebenze okungenani iinyanga ezi-6 okanye nangaphezulu.
Iindwendwe kufuneka zibe nemali eyoneleyo yokujongana nenkcitho yazo eSanta Helena. Ukuqinisekisa oku, iindwendwe kufuneka zibonelele ubungqina bemali ngelixa zifaka isicelo sevisa.
Yamkelwe iSanta Helena eVisa
Emva kokufika kwisikhululo seenqwelomoya iSaint Helena, iindwendwe kufuneka zivelise ii-eVisa zazo eziprintiweyo nezamkelweyo.
Ipasipoti efanayo eyayisetyenziselwa ukwenza isicelo kwi-intanethi. Zonke iinkcukacha mazingqinelane. Ipaspoti kufuneka isebenze iinyanga ezi-6 okanye ngaphezulu.
Iinkcukacha zeVisa yaseSanta Helena
Yintoni i-Saint Helena eVisa?
I-Saint Helena eVisa luxwebhu olufunwa ngumhambi ngamnye, ukungena kumda welizwe. Olu xwebhu lubanika imvume esemthethweni yokutyelela i-Helena kunye nokuhamba ngaphakathi kwemida yayo. I-eVisa yahluke mpela kwivisa yesiqhelo, apho abafaki zicelo, endaweni yokutyelela kwindlu yozakuzo nokulungisa idinga banokufaka isicelo kwi-Intanethi. Inkqubo ye-elektroniki inezibonelelo ezininzi ezenza ukuba ibe yeyona ndlela ikhethekileyo. Abantu ngoku banokufaka isicelo se-visa kuyo nayiphi na indawo abanqwenela ukuya kuyo. Inkqubo epheleleyo yokugcwalisa isicelo, ukungeniswa kwamaxwebhu kunye nokwenza intlawulo kunokugqitywa kwi-intanethi. Inkqubo yesicelo nayo ithatha ixesha elincinci kwaye i-visa yokugqibela ihanjiswa kwi-intanethi ngokunjalo.
Ungasifaka njani isicelo kwi-Visa yaseSanta Helena?
Isicelo se-eVisa yeyona ndlela ilula kwaye ikhawulezayo yokwenza ukuba isicelo siqhubekeke. Amanyathelo amathathu kuphela ekufuneka umfaki-sicelo awalandele, emva koko aya kuthi anikwe imvume yokuhamba. Nanga amanyathelo ekufuneka elandelwe ngabenzi-zicelo ukuqinisekisa ukuba ifom yesicelo ilungiswa ngempumelelo.
Gcwalisa ifomu lesicelo: Ifom yesicelo ye-eVisa kufuneka ikhutshelwe kuqala. Kungcono ukufumana ifom kwiziko lewebhu likarhulumente endaweni yentengiso. Emva kokukhuphela ifom, kufuneka igcwaliswe ngazo zonke iinkcukacha. Ulwazi kufuneka luchaneke.
Ungeniso lwamaxwebhu: Emva kokugcwalisa ifom yesicelo, amaxwebhu kufuneka athunyelwe kunye nayo. Njengoko le nkqubo ikwi-intanethi ngokupheleleyo, abafaki-zicelo kufuneka bawaskene kuphela amaxwebhu kwaye bangenise. Kubalulekile ukuqinisekisa ukuba ukuskena kwenziwa ngokucacileyo.
Yenza intlawulo: Okokugqibela, abafaki-zicelo kufuneka bahlawule umrhumo we-eVisa. Imali kufuneka ihlawulwe kusetyenziswa nayiphi na indlela yokuhlawula kwi-Intanethi enje ngekhadi letyala okanye ikhadi lebhanki. Emva kokuba kwenziwe intlawulo, le fomu ithunyelwa ukuqhubekekiswa. Abafaki zicelo baya kwaziswa ngobume besicelo kwaye kamva i-eVisa yokugqibela iya kuthunyelwa nge-imeyile.
Ukufika kwabo kwisikhululo seenqwelomoya iSaint Helena, kufuneka kuboniswe i-eVisa kwaye emva kokutshekisha amaxwebhu, iindwendwe ziya kuvunyelwa ukuba zingene.
Umyalelo wabakhenkethi abafaka isicelo seVisa yaseSanta Helena
Abantu abanerekhodi lolwaphulo-mthetho abanakunikwa visa. Abemi bamazwe aliqela baxolelwe ekubeni bafake izicelo zokundwendwela iSanta Helena. Ke kuyacetyiswa ukuba ujonge ngaphambi kokufaka isicelo.
Ukufumana i-visa ayizenzeli ukuba umntu afaneleke ukungena eSanta Helena. Ukuba amagosa okungenelela afumana nayiphi na imiba enala maxwebhu, anelungelo lokwala ukungena kumntu lowo, angene kweli lizwe.
Yintoni i-eVisa yaseSanta Helena?
Urhulumente wase-Saint Helena uvumele iindwendwe ezivela kumazwe ahlukeneyo ukuba zifumane i-visa yazo kwi-intanethi, ngenkqubo entsha ye-elektroniki.
Lithini ixesha lokusebenza kwe-Saint Helena eVisa esemthethweni?
Kuxhomekeke kuhlobo lwevisa oluye lwenziwa ngabenzi-sicelo, lusebenza kangangeentsuku ezingama-90 okanye ezili-180.
Ngawaphi amaxwebhu ekufuneka abenzi-zicelo babenawo kwinkqubo yokwenza isicelo se-eVisa?
Abafaki-zicelo bayacelwa ukuba bangenise iikopi ezikhutshiweyo zephepha lakho leencwadana yokundwendwela, ifoto yomenzi-sicelo, uhambo lokuhamba, i-inshurensi yezonyango / yokuhamba kunye nobungqina bemali.
Ngawaphi amaxwebhu ayimfuneko xa ufika eSaint Helena?
Emva kokufika kwabo, abafaki-zicelo kufuneka babonise i-visa yase-Saint Helena eyamkelweyo kunye noxwebhu lokuhamba.
Ngaba abafaki-zicelo baya kufumana imbuyiselo ukuba isicelo se-visa saliwe?
Hayi, ukuba isicelo saliwe, imali ayiyi kuhlawulwa.
Mangaphi amangenelo avunyelweyo nge-Saint Helena eVisa esebenzayo?
I-eVisa evunyiweyo ivumela zombini, ukungena kunye kunye nokungena kwi-Saint Helena.
Yeyiphi imiqathango ekufuneka ipasipoti ifezekise ukufaka isicelo se-eVisa eSaint Helena?
Ipaspoti kufuneka isebenze iinyanga ezi-6 okanye nangaphezulu xa usenza isicelo se-eVisa eSaint Helena.
Zeziphi iindlela zokuhlawula ezikhoyo zokuhlawula umrhumo we-eVisa?
Abafakizicelo banokuhlawula ngokulula umrhumo we-eVisa besebenzisa ikhadi elisebenzayo letyala okanye ikhadi lebhanki.
Abafaki zicelo baya kwazi njani malunga nenqanaba lesicelo sabo sevisa?
Abafakizicelo baya kwaziswa nge-imeyile yabo ye-Id malunga nenkqubela phambili yevisa yabo yokuhamba.
I-eVisa yakuba ivunyiwe, iya kuthunyelwa nge-imeyile kwi-imeyile yomenzi-sicelo.